अख्तियारको पञ्जाबाट कसरी उम्के बटेश्वर गाउँपालिकाका अध्यक्ष राउत ? - Hamro Janakpur
२०७७ फाल्गुन १८, मंगलवार १८:००
जनकपुरधाम । धनुषाको बटेश्वर गाउँपालिका अध्यक्ष डम्बर बहादुर राउत ८ लाख रुपैयाँ घुस रकम फालेर भागेको विषयले अहिले बटेश्वर गाउँपालिका तरंगित भएको छ । अध्यक्ष राउत के प्रयोजनमा कसरी घुस लिए ?, कसरी अख्तियारले रकम बरामद गर्यो ? अथवा उ गाडीबाट हाम फालेर कसरी उम्किन सफल भए ? लगायतको प्रश्न गाउँबासी लगायतमा चाँसोको विषय बन्नु स्वभाविक हो ।
उनी धनुषा जिल्ला भरिकै १८ स्थानीय तह मध्येकै बोल्नमा पोख्त बक्ता भएका पालिका प्रमुख हुन् । तार्किक रुपमा जवाफ दिएर आफ्नो व्यक्तित्व उच्च कोटिको रहेकोमा जो सुकैलाई झुक्याउन सक्ने कला भएकै कारणले राउत गएको स्थानीय तहको निर्वाचनमा तत्कालिन नेकपा एमालेबाट विजयी भएका थिए ।
निर्वाचित भएका बेलादेखि उनको हाउभाउ र बोलिवचन तथा सर्वसाधारणलाई गर्ने व्यवहार अस्वभाविक रुपमा परिवर्तन हुँदै गयो । पछिल्लो समय उनी राणकालिन जस्तै सर्वसाधारणसंग हेपेर कुरा गर्ने, कतिपय जेष्ठनागरिकलाई तँ तिमी भन्ने, प्रायः जसो सार्वजनिक स्थलमा पनि अपशब्द प्रयोग गर्ने जस्ता छुद्र व्यवहारको कारण उनको आलोचना हुँदै आएको थियो ।
जसको उदाहरण हो एकवर्ष अघि गाउँभित्रकै बडहडी खोला कमिसनको सेटिंगमा अवैध उत्खनन गराएर वडा नं. १ को विजयपुर गाउँलाई धरापमा पारेपछि गाउँपालिकामा ज्ञापन पत्र बुझाउन आएका गाउँलेलाई त्यति बेला उनले फटहा, उच्सृंखलको सज्ञा दिएका थिए । त्यसको केहिदिन नबित्दै पालिकाकै एकजना युवकले आफ्नो आमाको एकल महिला भत्ता बुझ्नो कार्ड नविकरण विषयमा फोन गरी जानकारी लिन खोज्दा एकल महिलाले ५० जना केटा लिएर हड्छन्, यो गाराउँछन्, त्यो गराउँछन् जस्ता अपशब्द बोलेर सम्पूर्ण एकल महिलाको अपमान गरेका थिए ।
गाउँपालिका कार्यालय भित्र पनि उनले कर्मचारीहरुलाई त तिमी गरेर बोलाउने, पेल्ने, धम्काउने जस्ता गतिविधिले कर्मचारीहरु समेत अध्यक्ष राउतबाट पीडित हुँदै आएका छन् । विकासे योजनामा कमिसन लेनदेनको कुरा उनको लागि समान्य भएको उपभोक्ता समितिहरुकै गुनासो रहँदै आएको छ ।
श्रोतका अनुसार सोहि क्रममा बटेश्वर गाउँपालिका कार्यालयकै प्रांगणमा निर्मित नयाँ भवनको भुक्तानीको लागि उनले मोटो कमिसन मागेका थिए । झण्डै एकसातादेखि भवन निर्माण सम्पन्न गरेका ठेकेदारलाई भुक्तानीको स्वीकृति दिन अध्यक्ष राउत आनाकानी गर्दै कामहरु बाँकी नै रहेको बाहानाबाजी गर्दै आएका थिए ।
तर ठेकेदारले भने सम्झौता अनुसारको भवन निर्माणको काम भने सम्पन्न गरेपनि उनी कमिसनकै लागि काम अधुरै भएको निहु बनाएर बार्गेनिंगमा उत्रेका थिए । यसै क्रममा अन्ततः ठेकेदार आफ्नो भुक्तानी लिन बाध्य भएर अध्यक्ष राउतलाई मोटो रकम कमिसन दिन तयार भए । अख्तियारले यो विषयमा जानकारी पायो ।
सोमबार अपराहन्न ४ बजे सोहि रकम लिन गाउँपालिका अध्यक्ष राउत चढ्ने गाउँपालिकाको प्रदेश २–००२–००१ झ ०००२ नम्बरको गाडीमा सबार भएर धनुषाको महेन्द्रनगर पुगे । ठेकेदारबाट ८ लाख कमिसन लिए । कमिसन रकम लिएर गाडीमा सेपछि उनले आफुलाई अख्तियारले पछ्याएको सुइको पाए । चालकलाई इशारा गर्दै तिव्रगतिमा गाडी चलाएर खोला हुँदै गाउँपालिका तिर भाग्न निर्देशन दिए ।